Takatanga gore muSurprise. Aubrey naMaturin Series, naPatrick O'Brian | Zvazvino Zvinyorwa
Takatanga gore muSurprise. Aubrey naMatrin Series, naPatrick O'Brian
Iyo frigate Kushamisika (foto kubva mubhuku Kugadzirwa kwaTenzi uye Mutungamiriri - Rutivi rwuri kure rwepasirakanyorwa naTom McGregor. Munyori weBritish Patrick O'Brian (1914-2000)
Evha Idzva Idzva zvaive zvisingaite kune isu vedu vasina kugadzirwa neconfetti uye sequins, saka ndakasarudza yakanaka cinema. Sarudzo, iyo isingakundike: Master uye Commander. Kure kwemahombekombe munyikanaPeter Weir (2003). Iwo akakwana echikepe ruzivo kubva kune akakwana mabhuku akateedzana.
Nenzira, ini ndakaita imwe resolution yeaya achangoburitswa 2017: kuverenga zvekare mazita angu andinoda kubva mune ino yakanaka nhevedzano. Rakanyorwa na Patrick O'Brian Makore makumi mana mushure mekufungidzira kwake kwekutanga, The Adventures of Captain Jack Aubrey uye chiremba wechiSpanish -Irish uye musori Stephen Maturin mwanakomana zvakakosha kune wese anodikanwa akanaka weiyo genre. Iyi yaive nyaya yangu yerudo navo.
Ndinoyeuka ndichiona mabhuku ndokugara kutarisa mifananidzo yakanaka pane zvivharo. Vakatonzwika kwandiri panguva imwe chete Ndakaona kuti Peter Weir aizoenda kumafirimu izvo zvifukidzo. Ndakanga ndisina nguva yekutanga verenga, unganidza uye ushamise saga yemasaini evaraidzo isina akaenzana uye asingagone kurova. Saka hongu, ndinozvibvuma uye handina kana basa nazvo: nekuda kwenyaya idzodzi ndakadziwana.
Asi zvakare mhando iyi -Zvose zviri zviviri zvinyorwa uye cinematographic- Yakandifadza kwenguva yakareba sezvandinoyeuka. Zvakare, ndakave nazvo mukana (uye rombo rakanaka) kufamba nechikepe uye kuziva hupenyu hunogona kunge hwakaita pagungwa.
Izvo zvaitarisirwa zvaive zvisingaiti. Zvipikiri zviitiko zvinonakidza na a Nhoroondo kumashure kutangira kubva French Revolution kusvika kumagumo eMambo weNapoleon. Un mutauro wakaoma kune avo vanoverenga ve marine slang kazhinji asi kusviba kutaridzika seinokwezva kushandisa nekuteerera. Uye izvo mavara asingakanganwiki.
About Wiki Jack Aubrey naStephen Maturin, ivo protagonists, kana vamwe vese mavara anovaperekedza, zvinenge zvese zvakatonyorwa kare. Asi tichisiya parutivi zvinhu zvinozivikanwa pasi rose zvekuvakwa kwayo, iyo pfungwa chii chingave chavo rakasiyana nemuverengi pachake. Chete vaifanirwa kushandura zviso zvavo zvive nyama neropa.
Ndiwo mashiripiti e cinema, zvisinei nemifananidzo iyo inogona kuverengwa nemuverengi mumwe nemumwe. Iwo mashiripiti aigona kunge asiri nani kana kubudirira kubudirira mu yakanakisa firimu inoenderana yakagadzirwa nemutungamiriri weAustralia Peter Weir we Kure kwemahombekombe munyika.
Kunze kweizvozvo kuchinja chii chakaitwa mu script -iyo ngarava yekutanga yeNorth America kubva mubhuku rakava french nekuti maYankees angave sei vanhu vakaipa mumamuvhi-, mhedzisiro yaive zvinoshamisa. Kunyangwe pamwe izwi rimwe rakaringana: Runako Chiedza, ruvara, mimhanzi yechiitiko chimwe nechimwe mukufungidzira uye izvo zvinodzokororwa pachiratidziro zvakangofanana. Uye zvakangonakawo.
Chikamu cheangu Aubrey-Maturin akateedzana kuunganidzwa.
Kune amateur mashoma kana chero munhu asingazvione iye anokwanisa kuisa pane izvo 20 chiito chakazara nenhau, kurangana, espionage, kupunzika kwechikepe, zvekunze masisitimu, zvisingaenzaniswi hondo dzegungwa unogona kuenda zvakananga kumifananidzo. Iwe zvirokwazvo uchada kuaverenga. Uye kana iwe uri mudiwa werunyorwa urwu, akateedzana ari kumanikidzwa uye inokodzera nzvimbo yakanakisa pasherufu yaunofarira.
Vatambi vakakweretesa chaiyo mitezo nemweya kune vanyori vanyori. Handina kuzoona mumwe wavo panguva iyoyo. Vaingova ivo mr allen (iyo boatswain), inoshanda uye yakashinga Captain Kudhonza, isingataurike uye inodakadza Killick, murwi wechikepe uye anotenda mashura Joe plaice, vanoda mr mowett… Uye zvechokwadi vatambi vaviri vakuru, imwe yeiyo vanyori vevanyori vekusiyanisa, nzira dziri nani uye dzinoshamisa.
Kune rimwe divi, ini ndaiyemurwa uye ndakaomarara chiremba Maturin, hafu chiCatalan hafu yeIrish spy pamwe nachiremba akakurisa uye muimbi. Rational, chaiyo, yakaoma uye panguva imwechete yakachengetedzwa, inofungidzira uye ine shungu.
Kune rimwe racho, Jack. Ruregerero, Kaputeni Jack Aubrey Vakakomborerwa. Saka rizere ne bonhomie, kubva a kunyanya kuseka uye mabhanan'ana ayo risa. Navo zvishuwo uye kuwandisa sekudhakwa, neako hunyanzvi pirate kutarisa kuseri kwechakapambwa, pfungwa yake yekukudzwa, basa uye chibayiro, kuraira asiwo kuremekedza. Uye izvo kunzwisisika mukati uye mukati asi zviri pachena murudo rwake rwemumhanzi, chikepe chake, iyo yakanaka frigate Kushamisika, nevarume vake.
Paul Bettany naRussell Crowe vakangonyangarika mavari. Ivo vaigona chete kuisa imwe asi: ivo vakachinjana kukwirira kwemavara mavara, nuance inokosheswa chete kune vaverengi venhau. Kune vamwe vese, vese vaive vakakwana.
Kana ipapo kana izvozvi handigone kuva nechinangwa uye ini handinzwewo senge. Kwandiri ndizvo akanakisa emahara adventure nhevedzano wenguva dzose. Uye ini ndaida kutanga gore idzva iri nekudzokorora rwendo rwakanaka zvakadaro. Ndinokoka munhu wese kuti atangewo rimwe remazita avo.
Aubrey naMaturin Series
Kaputeni wegungwa nehondo
Kure kwemahombekombe munyika
Rumwe rutivi rwemufananidzo
Iyo patent yemarque
Kwaziso gumi nenhatu dzerukudzo
Iyo schooner Nutmeg
Clarissa Oakes, kunamira mukati
Gungwa rakasviba kunge chiteshi
Rwokupedzisira Rusingapedziswe Rwendo rwaJack Aubrey, kwete kuburitswa muSpanish
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Novela » Takatanga gore muSurprise. Aubrey naMatrin Series, naPatrick O'Brian
Mhoroi masikati akanaka, ndakadzidza nezve Nhoroondo yemabhuku aya, kuburikidza nefirimu raRussell Crowe. Ndiri kuda kutora asi ndinobva kuMexico… Ndakavawana kupi?
Mhoro Angelica. Ndatenda nekutaura kwako. Ndakatenga mabhuku akateedzana muno muSpain, muchitoro chebazi kare kare. Ini ndinofungidzira iwe unogona kuvawanawo kuMexico. Chero zvazvingaitika, unazvo paAmazon.